IVeroño: kuyini, imvelaphi, izici nemiqondo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 23/09/2021 18:58 | Ukwahlukanisa
Uma kukhulunywa ngamasiko athandwayo nemeteorology, imiqondo emnandi iyazalwa. Omunye wemibono owenziwe eminyakeni yamuva ngukuthi lindokuhle. Ngezwi lakhe ungabona ukuthi usho ukuthini kalula. Lesi yisikhathi sonyaka ngoSepthemba nango-Okthoba lapho amazinga okushisa angahambelani nenkathi yawo. Kungashiwo ukuthi ingxube phakathi kwehlobo nasekwindla.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yini i-veroño, ukuthi yiziphi izici zayo nokuthi lo mqondo uqale ukuvela kuphi.
1 Yini i-veroño
2 Umsuka we-veroño
3 Imiqondo ethandwayo
4 Kukuphi okuthinta kakhulu?
Kungumqondo osetshenziswa kumasiko athandwayo ukubhekisa ezinyangeni zokuqala zesizini yasekwindla lapho amazinga okushisa angahambisani naleyo nkathi. Iveroño ihlangabezana nezimo zemvelo ezenzeka ekwindla kodwa ezinamazinga okushisa sengathi kusehlobo. Ungezwa abantu abaningi emgwaqweni bethi izinkulumo ezinjengokuthi "usale kahle ehlobo, sawubona veroño" noma "sisazoba ne-veroño isikhashana."
Kungashiwo ukuthi iyinhlanganisela yasekwindla nasehlobo kanti sekuyigama elisetshenziswa kakhulu ukuqanjwa kulezi zinsuku lapho bekushisa ekuseni bese liqala ukuphola ntambama. Okufanayo nawe ongakudla kahle i-chestnut yisikwele sedolobha ntambama nakusihlwa njengoba ungadla u-ayisikhilimu olwandle ekuseni nasemini. Lokhu ngaphambili kwakwaziwa njenge ihlobo laseSan Miguel elenzeka ekupheleni kukaSepthemba nasekuqaleni kuka-Okthoba futhi kubhekisa emazingeni okushisa afudumele asehlobo ngezikhathi zasekwindla.
Ukuzama ukuthola umsuka walo mqondo, kufanele sibuyele emuva ku-2009 nakwinethiwekhi yokuxhumana nabantu ye-Twitter. Kulapha lapho izinyanga zokuqala zaqala khona lapho amazinga okushisa angahambisani nhlobo nenkathi yonyaka lapho sasikhona. Eminyakeni edlule Lo mqondo ubulokhu ubaluleka kakhulu futhi ufinyelele esiqongweni sawo ngonyaka wezi-2015. Kusukela lapho lo mqondo wethulwa ezihlokweni eziningi nasemibikweni futhi usetshenziswa ngokuqhubekayo kusiko elidumile.
Kungashiwo ukuthi kuyindlela elula yokuchaza leso sikhathi sonyaka lapho amazinga okushisa ephakeme kakhulu ngokungajwayelekile kunalokho esikujwayele. Kumele futhi ngibheke isizukulwane esizithola sikuso. Labo abazalwa ngemuva konyaka we-2000 abazi kangako ngokushintsha kwamazinga okushisa okubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu, ngoba basebancane kakhulu futhi abanalo irekhodi elidala. Leyo minyaka engama-30 nangaphezulu bazi ngokwengeziwe ushintsho lokushisa olubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu.
Siyazi ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kwandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba nokuthi izinkathi ezibandayo ziya ngokubandayo. Lokhu kwenza isikhathi sehlobo sihlale isikhathi eside kunokujwayelekile. Kodwa-ke, ngezikhathi zantambama nasebusuku lapho ilanga lishona, selivele linamandla ngokwanele ukuthi lifudumale ngezikhathi zasemini, siyabona ukuthi amazinga okushisa abuyele emuva ngendlela obekufanele abe ngayo kulesi sikhathi esikuso.
Kodwa-ke, ngaphandle kokuthi leli gama lisetshenziswa kakhulu ngokwesiko elidumile, isikole sangempela saseSpain asikatholakali. Ayaziwa njengegama elisemthethweni, ngakho-ke kungumqondo nje odumile. Kuyindlela elula yokubhekisa kulesi sikhathi. Ukuthi i-veroño ayikakafakwa esichazamazwini, akusho ukuthi ngeke ibe khona ngokuzayo. Eqinisweni, amagama amaningi asetshenziswa emgwaqweni angene esichazamazwini. Isibonelo, amanye amagama afana ne-amigovio noma i-papichulo. I-Amigovio isho lowo muntu onobudlelwano naye onokuzibophezela okuncane kunokuqomisana.
Futhi kuya ngendawo ohlala kuyo ukuthi lemiqondo isetshenziswa kaningi noma cha. Omunye umqondo ofakwe eRoyal Spanish Academy yilowo wepaphulohulo. Imayelana nendoda okuthi, ngenxa yokuheha kwayo ngokomzimba, ibe yinto efiswa ngabesilisa noma ngabesifazane.
Futhi ukuthi isikole sangempela saseSpain asikwenzi kucace bha ukuthi yiziphi izindlela ezidingekayo ukuze igama lifakwe ohlwini. Kubukeka sengathi iningi labantu likhuluma ngegama elithile njalo futhi liyalibhalisa. Lokhu akulula njengoba kubonakala. Abagcwele ezifundweni kumele bavume ukwazi ukuthi leli gama lifanelekile noma alifanelekile yini ukufakwa ohlwini. Kube nezimpikiswano ezithile uma kukhulunywa ngokufaka amagama afana nepepero, culamen kanye ne-squat.
Akumangazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umqondo we-veroño ungafakwa njengegama elisemthethweni.
Kukuphi okuthinta kakhulu?
Uma kukhulunywa ngokungenisa i-veroño ezimpilweni zethu, kufanele futhi sazi ukuthi kwenzeka kuziphi izindawo ngokuvama okukhulu nangamandla. Khumbula ukuthi amadolobha amakhulu namadolobha anezinga lokushisa eliphakathi nendawo nobusuku. Ukuphakama okushisayo kunikezwa ukungabikho kolwandle okungalawula izinga lokushisa futhi kushelele ushintsho lwalo. Ngakho-ke, usuku lonke singabona amazinga okushisa aphakeme kakhulu futhi ebusuku ukwehla okubonakala kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, emadolobheni amaningi asogwini ukutholakala kwe-veroño kuthambile ngandlela-thile. Lokho kusho ukuthi, Umehluko wamazinga okushisa phakathi kwalawo emini nantambama awubonakali kangako kuya ngesizini yonyaka esikuyo. Isibonelo, ngenkathi edolobheni elisenkabeni yezwe kungaba nezinguquko ezingazelelwe ekushiseni okungaphezu kwamadigri ayi-15 phakathi kwemini nobusuku, edolobheni elisogwini kukhona okuncane.
Njengoba ukwazi ukubona, isiko elidumile lidala imiqondo yokukwazi ukuthola lezo zimo ezikhethekile indoda engakaze ibe nazo kuze kube manje. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi i-veroño iyini nokuthi yiziphi izici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Verrano
I-Glacial Ocean yase-Arctic